I-Indiya kwi-Middle Ages, yayinjani kwaye igcina siphi isiko? | Ukuhamba kwe-Absolut
USusana Maria Urbano Mateos | | Ihlaziywe 12/07/2018 16:50 | Indiya
La I-Indiya kumaXesha Aphakathi Eli yayilixesha elizele yimbali kunye neziganeko ezinomdla kakhulu, apho ubukhosi obukhulu, iintshukumo ezinkulu kubugcisa noncwadi zabonwa, ekungathandabuzekiyo ukuba kuyonwabisa kakhulu ukubakho, ngakumbi ngakumbi sisazi ukuba izakhiwo zezakhiwo ezikhulu zexesha , njengamangqina amandla awayenawo la maxesha ngexesha lawo kunye nokuzinza kwawo kwimihla yethu.
Sijoyine kolu hambo lokudlula eIndiya kwi-Middle Ages apho siza kukuxelela khona izinto ezibalaseleyo zelo xesha kunye nendlela ebe nefuthe ngayo kwinkcubeko yethu ukuza kuthi ga kulo mhla.
1 Impembelelo eIndiya kumaXesha Aphakathi
2 Ubukhosi bamaXesha Aphakathi
2.2 IiChalukias kunye nePallavas
2.3 Iipalas, i-pratiharas kunye ne-rastrakutas.
2.5 UMzantsi okanye iDelhi Sultanates
3 Indlela yeSilika
4 Olunye umtsalane i-India igcina ukusuka kumaXesha Aphakathi
Impembelelo eIndiya kumaXesha Aphakathi
Ixesha elibandakanyekayo iminyaka ephakathi, yayibaluleke kakhulu kwiinkcubeko ezininzi, kuba oku kuncede ukukhula kunye nokubonakaliswa kwenkcubeko, ukutya, umculo kunye neenkolelo. I-Indiya imi kweyona ndawo ifanelekileyo yase-Asiya, ibekelwe umda entshona nasempuma-mpuma yiPakistan, kunye neTshayina neNepal empuma.
En ixesha eliphakathiKwakude kudala ngaphambi kobukhosi bamaKrestu, yayisaziwa ngokuba yindawo apho abantu baqala khona ukuba nempucuko, nangaphandle kokuba nenkolo yesithembu. unkolo yamaHindu, Yeyona nkolo indala eye yachuma kakhulu ngexesha ixesha eliphakathi, ukongeza ekubonakaliseni izakhiwo zabo bonke oothixo babo, njengemibhiyozo ethiwe thaca enyakeni ukuya khumbula iinkolelo zakho, ngokungathandabuzekiyo emangalisayo qonda kwaye ufunde ngonqulo irhabaxa ngolu hlobo.
Ubukhosi bamaXesha Aphakathi
Ukongeza, engonelisekanga lunqulo olukhulu olwaluthatha ubume obungaphaya ebudeni bamaXesha Aphakathi, i-Indiya yabona kudlula ubukhosi obukhulu phambi kwayo, njenge:
Ubukhosi basemantla eIndiya, apho i-apogee yayo yayiphakathi kweminyaka engama-320 ukuya kuma-540, ngeli xesha ubugcisa bobuBhuda bufikelela kwiZenith, ukongeza ekushiyeleni njengeLifa lemiqolomba yaseAjanta, ethathwa njengeetempile zokuqala zamaBuddha, Ixabiso elikhulu lobugcisa beAdamas lokuthathwa njengendawo yelifa lemveli.
IiChalukias kunye nePallavas
Ubukhosi baseChalukia, babengabalawuli abaphambili bommandla osemazantsi eIndiya, bakhulelwa okwaziwayo njengobudala begolide ngeli xesha, kuyo kwavela ubugcisa beChulakia, obuyimpawu yesitayile sayo, izakhiwo zeli khosi.
Ubukhosi bePallavas, njengechalakias, babenegunya eliphambili kumazantsi eIndiya, bona ngeli xesha babengamadlelane, bangabameli abaphambili bezakhiwo zeDravidian, ezinokubonwa eMahabalipuram.
Iipalas, i-pratiharas kunye ne-rastrakutas.
I-Pallas ithathwa njengenye yeenamandla eMntla India kwiminyaka eyi-770-810 basungula iYunivesithi yaseVikramshila, eyayiliziko elidumileyo lokufunda ubuBuddha eIndiya.
Ipratiharas urhulumente wabo uqhubeke ukusuka ku-730 ukuya ku-765 inkcubeko enezakhiwo ezinkulu kodwa ngelishwa zonke bezonakele ngenxa yeemfazwe.
I-Rastrakutas ubukhosi obudumileyo obunemisebenzi emininzi yobugcisa kunye nezakhiwo ezisalondoloziweyo, ngaphandle kwamathandabuzo itempile eyaziwayo yitempile yaseKrishneswara eRameswaram.
Enye yeenkcubeko ezinkulu, ezazigxile ikakhulu emantla nakumbindi weIndiya, zazinexesha elinokuguquguquka apho iklasi yayo yahlulwe yangamanqanaba aphantsi, izinto ezigciniweyo zenkcubeko yazo ziyagcinwa, kunye nezizwe ezinokufumaneka nangoku.
UMzantsi okanye iDelhi Sultanates
Ubukhosi bancedwa ngamaSilamsi, abathi ekuqaleni balawula emantla eIndiya ukuze kamva basasazeke emazantsi, ngenxa yokudityaniswa kweenkcubeko kwabakho uqhambuko olutsha kubugcisa, inkolo, amasiko, uyilo kunye nempahla.
Ngeli xesha, yafikelela kubuhle obukhulu benkcubeko kunye nezenzululwazi ezinje:
IMathematika, apha bafumanise inani 0, kunye nenani lokugqibela.
I-Astronomy: bafumanisa ukuba umhlaba ujikeleza kwindawo yawo, kunye nesizathu sokusithwa kwelanga yinyanga.
Iyeza: ukulungiswa kwamayeza.
Uncwadi: indalo yeqonga kunye nebali.
Njengokuba oko kwakungonelanga, i-India yindawo elayishwe ngeyona nto ibalulekileyo ngokwenkcubeko, ukuba yi indawo efanelekileyo yendawo Kwaye kubalulekile, ngexesha lama-Middle Ages i-India kunye nama-Arabhu benza into eyaziwa ngokuba yi- "Indlela yeSilika " Ukwenza isivumelwano sokurhweba esomeleleyo kunye neentlobo, apho ukurhweba okunamandla neYurophu kunye neAsia kwakusetyenzwa ngazo, kuba zonke iincasa ezingaqhelekanga ekufanele ukuba uzinikeze zathathelwa ingqalelo kwaye zathathelwa ingqalelo njengoyolo lokwenyani, usengayifumana imizila ebonisa oku.
Alithandabuzeki elokuba iIndiya yaPhila kumaXesha Aphakathi yayihlala ixesha elibaluleke kakhulu kubo, kuba ilixesha lotshintsho ingakumbi lokutshintsha ukusuka kumaxesha amandulo ukuya kwihlabathi lanamhlanje, njengoko kucacile, amasiko asekwe kule ndawo asagcinekile, ke ngoko ithathwa njengendawo egcina inkcubeko yayo ngenxa yoko bagcine amasiko abo.
Olunye umtsalane i-India igcina ukusuka kumaXesha Aphakathi
Nokuba ungaphumelela kwizitalato zayo intsomi emangalisayo, kwiincasa zayo, amavumba, amasiko kunye noyilo. Imithendeleko yabo isagcinekile njengoko injalo "IDiwali" owaziwa njengesiqalo soNyaka oMtsha wamaHindu obhiyozelwa ukusuka nge-7 ka-Okthobha ukuya nge-8 kaNovemba, ongomnye wemibhiyozo emikhulu, apho ubusuku bukhanyiselwa ngokukhanya kunye nemidaniso ezitratweni ukongeza ukusetyenziswa komlilo ngalo lonke ixesha lokubhiyozela, ngaphandle kwamathandabuzo umbhiyozo ongafuni kuwuphoswa.
I-Indiya, yi Indawo yomlingo Igcwele inkcubeko kunye nembali ongenakuyihoya, ihlala inezinto ezintsha eziza kukumangalisa, kuba inkcubeko kunye nezithethe zayo zithathwa njengezona zintle, ukongeza ekubeni ne-gastronomy yeyona palate inzima, egqibeleleyo ixesha elidlulele.
Ukuba ucinga ngendawo onokuya kuyo kwaye unomoya wokuzonwabisa, ukulungele ukwazi nokufunda, le ndawo yokufikela kuyo lolona khetho lubalaseleyo kulutsha nakwabadala, musa ukuchitha ixesha elininzi kwaye uthathe isigqibo sokundwendwela le ndawo yomlingo kwinkampani okanye kwi yeyakho. Ucinga ntoni nge I-Indiya kumaXesha Aphakathi?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » I-Indiya kwiminyaka ephakathi